ကွန်ကရစ် pump - တရုတ်ထုတ်လုပ်သူများ, စက်ရုံ, ပေးသွင်း - CO-NELE
ကွန်ကရစ် pump - တရုတ် မှစ. ထုတ်လုပ်သူများ, စက်ရုံ, ပေးသွင်း
No matter new consumer or outdated shopper, We believe in lengthy expression and trusted relationship for Concrete Pumping, အသေးစားကွန်ကရစ် Pump Truck ကား , ကွန်ကရစ် pump ၏ဈေးနှုန်း , စျေးပေါတဲ့ကွန်ကရစ် pump , "Quality 1st, Rate least expensive, Provider best" is definitely the spirit of our company. We sincerely welcome you to go to our business and negotiate mutual small business! It can be our duty to satisfy your preferences and successfully serve you. Your pleasure is our best reward. We have been looking forward to the go to for joint expansion for Concrete Pumping, Due to the changing trends in this field, we involve ourselves into products trade with dedicated efforts and managerial excellence. We maintain timely delivery schedules, innovative designs, quality and transparency for our customers. Our moto is to deliver quality products within stipulated time.
လျှပ်စစ်အမျိုးအစား: XBS30-10-37, XBS40-11-45 Output ဖိအား: ။ 10Mpa 11Mpa Cylinder DIA လေဖြတ်×: Φ140 * 1200mm မက်စ်စုစုပေါင်းအရွယ်အစား: ≤30mmရေနံ Pump: PLA7313 / Kawasaki မော်တော်အမှတ်တံဆိပ်: Yantai / Siemens အမြင့် / အကွာအဝေးချပေး : 120 မီလီယံ / 360m ဒီဇယ်အမျိုးအစား: DXBS40-11-56 မက်စွမ်းဆောင်ရည်ချပေး: 40m3 / ဇ Output ဖိအား: 11Mpa CY ...
OEM/ODM Factory 30 Cubic Meter Per Hour Concrete Pump - Shotcrete spraying car QSP30A – CO-NELE
မော်ဒယ်: KNL5160TPJ-25 KNL5160TPJ-30 မက်စ်သီအိုရီကို output: 25m3 / ဇ 30m3 / ဇ Output ဖိအား: ။ 8Mpa Cylinder DIA ×လေဖြတ်: Φ160 * 1000mm ပက်ဖျန်းအမြင့်: 16m ပက်ဖျန်းအကျယ်: 26.8m ဗိုင်းလိပ်တံ axial လည်ပတ်ထောင့်: 360 °အင်္ဂါရပ်များ: 1 .Front နှင့်နောက်ဘက်ခြေထောက်ဟာ span ကြီးမားသော, အလုပ်တည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ 2.The စန်းအချိုးကျချမှတ် ...
China OEM 48m Truck-mounted Concrete Pump Truck – Shotcrete spraying car QSP30A – CO-NELE
စန်းပွအရှည်: စွမ်းဆောင်ရည်ချပေး 25m မက်စ်: 111m³ / ဇမက် Output ဖိအား: 9.5Mpa မက်စအချိန်ချပေး: ။ 32t / မိနစ် Delivery Cylinder DIA ×လေဖြတ်: Φ230 * 1400mm ကိုသတ်ရ Angle: 270 °စန်းဖွဲ့စည်းပုံ±:4မီလီယံ (800Mpa SteelPlate မှ 700Mpa) အမြင့်နှင့်အနိမ့ဖိအားပြောင်းလဲမည်: Electronicallycontrolled အော်တို Chassis ကိုအမှတ်တံဆိပ်: ဒွန် ...
Professional China Putzmeister Concrete Pumps And Hose - CE Certificate Ce And Iso9001 Certificate Truck Mounted Concrete Boom Pump Truck For Sale – CO-NELE
စန်းပွအရှည်: စွမ်းဆောင်ရည်ချပေး 30 မက်စ်: 111m³ / ဇမက် Output ဖိအား: 9.5Mpa မက်စအချိန်ချပေး: ။ 32t / မိနစ် Delivery Cylinder DIA ×လေဖြတ်: Φ230 * 1400mm ကိုသတ်ရ Angle: 270 °စန်းဖွဲ့စည်းပုံ±:4မီလီယံ (800Mpa SteelPlate မှ 700Mpa) အမြင့်နှင့်အနိမ့ဖိအားပြောင်းလဲမည်: Electronicallycontrolled အော်တို Chassis ကိုအမှတ်တံဆိပ်: ဒွန် ...
One of Hottest for Concrete Pump Machine - Concrete Mixer pump Electric JBT30-11-45 – CO-NELE
Wholesale Dealers of Concrete Pump Hose Prices - High Performance 37m Concrete Pump Trucks Lorry For Sale – CO-NELE
Good User Reputation for Cement Mixer Truck - Mobile placing boom HGY13 – CO-NELE
မော်ဒယ်: HGY13, HGY15, HGY17, HGY21, drive ကို၏ HGY23 Mode ကို: အပြည့်အဝဟိုက်ဒရောလစ်အမျိုးအစား: ဘီးမပါဘဲနှင့်ဘီး Boom ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ: 13-17m is3M, 21-23m4သန်းတန်ပိုက်လိုင်းအချင်းဖြစ်ပါသည်: 125mm အင်္ဂါရပ်များ: "Z ကို" -shaped three- အပိုင်းခေါက်လက်မောင်း, 360 °လည်ပတ်, အစေးများနှင့်တိုးချဲ့လွှဲခွင်, All-ရှုထောင်က c ...
OEM/ODM Manufacturer Sany Concrete Pump Spare Parts - Shotcrete spraying car QSP30A – CO-NELE
100% Original Factory Cheap Concrete Pump Mixer - Horizontal HGY17 HGY19 – CO-NELE
မော်ဒယ်: HGY17, drive ကို၏ HGY19 Mode ကို: အပြည့်အဝဟိုက်ဒရောလစ် Boom ဖွဲ့စည်းပုံနှစ်ခုအပိုင်းအလျားလိုက်ကိုသတ်ပိုက်လိုင်းအချင်း: 125mm အင်္ဂါရပ်များ: Wiredly အဝေးပြေးလမ်းမကြီးများတွင်အသုံးပြုရမည်, hihg မြန်နှုန်းသံလမ်း, လယ်ပြင် beams ။ အလင်းဖွဲ့စည်းပုံ, အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်။ အတူတူအလုပ်လုပ် site ကိုအတွက် differnet ရာထူးတစ် relati အတွက်ကရိန်းလွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ် ...
Leading Manufacturer for Special Twin-wall Pipe - Horizontal HGY17 HGY19 – CO-NELE
China Cheap price Mini Concrete Pump - 47m Boom Pump Truck – CO-NELE
စန်းတာရှည်: စွမ်းဆောင်ရည်ချပေး 47m မက်စ်: 130m³ / ဇမက် Output ဖိအား: 9.5Mpa မက်စအချိန်ချပေး: ။ 32t / မိနစ် Delivery Cylinder DIA ×လေဖြတ်: Φ260 * 1800mm ကိုသတ်ရ Angle: 270 °စန်းဖွဲ့စည်းပုံ±: 6RZ (1000Mpa သံမဏိပြား) အမြင့် အနိမ့်ဖိအားပြောင်းလဲမည်: အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်အလိုအလျောက်တည်ငြိမ် X ကို outriggers ချာ ...
Chinese Professional Small Concrete Pumps - Concrete Pump HBT – CO-NELE
လျှပ်စစ်အမျိုးအစား: HBT60-13-90, HBT60-16-110, HBT80-13-110, HBT80-16-132 Output ဖိအား: 13Mpa 16Mpa မက် Aggregate Size: ≤50mmရေနံ Pump: Kawasaki / Rexroth မော်တော်အမှတ်တံဆိပ်: Yantai / Siemens pump အမြင့် / အကွာအဝေး: 180m / 700m 250m / 1000m ဒီဇယ်အမျိုးအစား: DHBT60-13-118, HBT60-16-140, DHBT80-13-140, DHBT80-16-174 Output ...
China Gold Supplier for Small Pneumatic Cylinder - Concrete Mixer pump Electric JBT30-11-45 – CO-NELE
Professional China 700l Concrete Boom Pump Truck - Boom pump truck howo30m – CO-NELE
Factory Cheap Hot 24m Truck Mounted Concrete Boom Pump - Boom pump truck howo 44m – CO-NELE
1.EquipΦ260mmဆလင်ဒါ, ကြီးမားတဲ့ရွှေ့ပြောင်းခံရချပေးစနစ်, ပစ္စည်းစုပ်ယူမှုထက်ပို 88% ဖြစ်ပါသည်, တူရွှေ့ပြောင်းခံရနှင့်အတူအသွားအပြန်၏နံပါတ်နိမ့်သည်ကို၎င်း, ဝတ်ထားအစိတ်အပိုင်းများဘဝရှည်လျားသည်, 2.The မြစ်ရေတင်စီမံကိန်း system ကိုအီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်အသွားအပြန်ချမှတ်။ အဆိုပါမြစ်ရေတင်စီမံကိန်းအသွားအပြန်အမြန်ဖြစ်ပါတယ် ...
စန်းတာရှည်: စွမ်းဆောင်ရည်ချပေး 33m မက်စ်: 111m3 / ဇမက် Output ဖိအား: 9.5Mpa မက်စအချိန်ချပေး: ။ 32t / မိနစ် Delivery Cylinder DIA ×လေဖြတ်: Φ230 * 1650mm ကိုသတ်ရ Angle: 270 °စန်းဖွဲ့စည်းပုံ±:4မီလီယံ (900Mpa သံမဏိပြား) အမြင့် အနိမ့်ဖိအားပြောင်းလဲမည်: အီလက်ထရောနစ်ထိန်းချုပ်အော်တို Chassis ကိုအမှတ်တံဆိပ်: SINOTRUCK HO ...